Chii chaunonyanya zvakanaka pakati E-sikuta, akangwara sikuta uye E-skateboard? - Jomo Technology Co., Ltd
Chii chaunonyanya zvakanaka pakati E-sikuta, akangwara sikuta uye E-skateboard?
Pakuonekwa , pakuonekwa vacho vakasiyana, asi zvikurukuru vanovimba pakuenzanisa vanhu kuti vabudirire, pamusoro pachiyero kugona kudiwa imwe yekudzidza, hapana achava akanaka panguva akatasva izvi sezvo vari kuberekwa.
Electric sikuta zvichienzaniswa ekupedzisira maviri, zviri nyore kudzidza uye kuzvidzora sezvo weel sezvo zvakawanda vakachengeteka, nekuti mubato pamwero anogona kuderedza mukana yakadonha, kunyanya ruzivo, apo kuvimba ayo kubata mirayiridzo.
Akazvimedura , vose vane akaputsa basa, asi braking nzira yakasiyana, yemagetsi sikuta kuti akaputsa ndiro zvokuimba akamedura, kuruboshwe choruoko mhikuriso une akamedura bhatani, unogona danho vhiri shure kwenyu, ndiko pusa akamedura.
The Smart sikuta uye Electric Skateboard's akaputsa kunobva neizvi pakuenzanisa, ukuwo inertia vanhu uye motokari zvichapfuura pamwe akamedura, pasinei kumhanya ndiko, kuti mabhureki inogona nyore kudzorwa, vasimba akamedura.
Speed , pasi zvakajairika ezvinhu, nokumhanya yemagetsi skateboard rava, achikwira kugona anopfuura vamwe vaviri. Normal nokukurumidza ndiyo 30km / h, pamusoro kukurumidza ndiyo 40km / h, enda mhanyisa
Koowheel Electric sikuta L8, kuti Max nokukurumidza ndiyo 25 Km / h apo fekitari anosiya (The Max nokukurumidza zvinogona kugadziridzwa kuti 30KM / H thrugh APP marongero nemhengo)
The Max kumhanya Smart Chiyero sikuta K5 ndiye 15KM / H.
Zvinogona kuonekwa kuti dzemagetsi Scooters L8 uye Electric skateboard vari dzichimhanya kupfuura akangwara sikuta pamusoro nokukurumidza. Tinogona atakure kwaamboenda. Electric skateboard iri yakawanda, zvikuru pachena munguva nhokwe maawa. Vose zvishandiso zvakanaka nzendo pfupi.
Pamusoro mufashoni uye muchitonhorera pfupi-rwendo maturusi, izvo chaunonyanya zvakanakisisa?
© Copyright - 2015-2021: All Rights Reserved. Nesimba Koowheel.com